नयाँ दैनिक | नेपालमा गरिखाने वर्गको आन्दोलन फेरि उठ्ला ? नेपालमा गरिखाने वर्गको आन्दोलन फेरि उठ्ला ? – नयाँ दैनिक
विजय ढकालजस्ता युवाले देखेका सपना त्यसै हराइसके ? नयाँ शिराबाट फेरि आन्दोलनको नवनिर्माण गर्नेहरू पनि कतै छन् ?
सिर्जना ढकाल comment 0
मैले पत्याइनँ। बहिनी र आमा मूर्तिजस्ता भएर बसेका थिए। बहिनीले ‘दाइलाई फोन गर्नु न दिदी, बाले त त्यसै के–के भन्नुहुन्छ’ भन्न थाली। प्रशासनको निगरानी हुन्छ भनेर घरको फोनबाट हामी दाइलाई फोन गर्दैनथ्यौं। तर, त्यो दिन पहिलो चोटि दाइलाई घरबाट फोन गर्‍यौं। राजेन्द्रले फोन गर्नुभयो र फोन उठ्यो पनि। तर, उठाउने मान्छे हाम्रो दाइ नभई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको अधिकारी थियो, फोन उठाउनेलाई ‘विश्वास खै ? ’ (दाइको पार्टी नाम विश्वास थियो) भनेर सोध्दा उसले साम्मी मैदानतिर गएको छ भन्यो। मलाई अझै पनि दाइको हत्या भएको होइन, बरु गिरफ्तार गरेर कतै राखेको हुनसक्छ भन्ने लाग्यो, त्यो कुरा बालाई भनेँ पनि।
घरबाट दाइको फोनमा फोन गरेको केही बेरमा सेनाको ब्यारेकबाट फोन आयो। त्यहाँबाट फोन गर्ने को हो भनेर सोधपुछ गर्न थाल्यो। दाइको हत्या भएको त लगभग पुष्टि भइसकेको थियो। बा–आमालाई थप आतंकले घेर्यो, माओवादीसँग सम्पर्क गरेको अभियोगमा छोरी र ज्वाइँलाई पनि दुःख दिने हुन् कि भन्ने। दाइको हत्याको खबर पुष्टि गर्न केही परिचितले फोन गरे। मलाई भने हरेक पल्टको फोनको घन्टी दाइको फोनजस्तो लागिरह्यो। म दाइको हत्या भएको मान्न तयार थिइनँ। जहिले पनि अप्ठेरोमा परेर उम्केपछि दाइको फोन आउँथ्यो मलाई, ‘बुझिस् मुस्किलले फुत्कियो आज’ भन्दै। म दाइको त्यस्तै फोन आउने आशामा थिएँ। तर, दाइ ठिकै हुनुहुन्छ भन्ने खबर कसैले सुनाएन। बरु दाइको शव सेनाले चौरमा फालिराखेको छ भन्ने खबर कसैले बालाई सुनायो। त्यो रात हामी सबैका लागि जिन्दगीको सबैभन्दा लामो रात थियो। हामी पाँचै जनाले त्यो रात अनिँदै काट्यौं।
भोलिपल्ट माघ १ गते हामीलाई अर्को लडाइँका लागि तयार हुनु थियो। त्यो थियो अन्तिम संस्कारका लागि दाइको शव प्राप्त गर्ने लडाइँ। त्यो दिन केही मानवअधिकारवादी घटनास्थल जाने रहेछन्, बा पनि राजेन्द्रलाई लिएर उनीहरूसँग साम्मी मैदान जानुभयो। त्यहाँ सेनाले घेरा हालेर बसेको रहेछ। तल जंगलमा छ भनेर शव हेर्न दिएन र बालगायत अरूहरू त्यसै फर्कनुभयो। दाइको शव प्राप्त गर्ने बाको प्रयत्न जारी थियो। दोस्रो, तेस्रो र चौथो दिन बाले प्रयत्न गरिरहनुभयो तर दाइको शव दिइएन। केही नलागेपछि ठूलोबा त्रिलोचन ढकालले माधवकुमार नेपाललाई फोन गर्नुभयो। माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई र देउवाले प्रधानसेनापतिलाई भनेपछि मात्रै शव दिइने कुरा आयो। त्यति बेला राजाको सक्रिय शासन थियो र एमाले आधा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै कांग्रेससहित सरकारमा थियो।
राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निःशस्त्र युवकको शव प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्रीको सोर्स लगाउनुपर्ने बढो विचित्र स्थिति थियो यो। मानवअधिकारवादी संगठनहरू यो गैरन्यायिक हत्या हो भनेर आवाज उठाइरहेका थिए तर संकटकालको त्यो कालरात्रिमा शासकहरू यो कुरा सुन्न तयार थिएनन्।
रातको साढे आठतिर दाइको शव दोविल्लाको बगरमा ल्याइपुर्‍याइयो। हामी पनि त्यहाँ पुग्यौं। अब भने दाइ हुनुहुन्न भन्ने कुरा नस्वीकारी हामीलाई धर थिएन। हामीले अब दाइलाई अन्तिमपटक हेर्नु र अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिनु थियो। जबर्जस्ती मन सम्हालेर दाइको क्षतविक्षत शरीर हेर्‍यौँ।
दाइलाई पहिला खुट्टामा गोली हानेर त्यसपछि टाउकोमा ढुंगाको छपनीले हानी हानीकन मारिएको थियो, अनुहार थिएन, छाला मात्रै थियो। टाउको दुई फक्लेटा पारिएको थियो। चिउँडोमुनि संगीनले कोपेको घाउ थियो।
मारिसकेपछि फेरि गोली हानेजस्तो लाग्थ्यो। हत्या गरिसकेपछि जंगलमा खाल्डो खनेर गाडिएको थियो। खाल्डोबाट निकालेर दाइको शव ल्याइएको थियो। बल्लतल्ल मन थामेर हामीले दाइलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दियौं। कसैको मोबाइलमा बाको लागि एउटा फोन आयो।
हाम्रो लागि उहाँ दाइ हुनुहुन्थ्यो। तर, विजय ढकाल (२०३३–२०६१) गण्डक क्षेत्रमा एउटा लोकप्रिय युवानेता हुनुहुन्थ्यो। कास्की जिल्लाको सेक्रेटरीको जिम्मेवारीमै हुँदा उहाँको हत्या भएको थियो। त्यसकारण पार्टीले यस घटनामा चासो राख्नु अस्वाभाविक थिएन। तर, फोन आएपछि थाहा भयो, छोराको शव प्राप्त गर्न लडेको लडाइँपछि बाले आफ्नै छोराका साथीहरूसँग अर्को लडाइँ लड्न त बाँकी नै रहेछ। फोन गर्ने मान्छे त्यही थियो, जसले दाइको हत्याको खबर दिन घरमा फोन गरेको थियो। फोन गर्नेको आवाजमा न सहानुभूति थियो न हार्दिकता नै। ऊ आफू सुरक्षित ठाउँमा बसेर बालाई कासन गर्दै थियो। उसले बालाई दाइको शव पोखरा सहरमा लगेर प्रदर्शन गर्न आदेश दियो। त्यो कसरी सम्भव थियो भन्ने न उसले सोच्यो न उसका नेताहरूले नै। बस् उसले आदेश दियो। उसले भनेजस्तो गर्न असमर्थता जनाएपछि शवलाई त्यहीँ त्यसै छोड्न उसले बालाई आदेश दियो। अनि बाले पाँच दिनसम्म उनीहरूले नलगेपछि सबैको प्रयासमा शव ल्याएको र अझै पनि उनीहरू आउँछन् भने शव हस्तान्तरण गर्न आफू तयार भएको भन्नुभयो। उसले जवाफमा शव त्यहीँ छोड्न र आफ्नो अनुकूलतामा आएर शव लैजाने गैरजिम्मेवार कुरा गर्यो। भर्खरै मारिएको आफ्नो नेता गुमाउनु परेको पीडा उसमा थिएन नै। उसले सहिदको पितालाई हदैसम्मको अपमान र थप पीडा दियो।
१३ वर्षपछाडि फर्केर हेर्दा लाग्छ, परिवर्तनको नाममा हामीले हाम्रा प्रियजनहरू गुमायौं। समाजमा केही परिवर्तन पनि भयो। तर, मुठ्ठीभर मानिसका लागि मात्रै। आमजनताको रगतपसिनाले लडिएको ‘जनयुद्ध’ले ल्याएको परिवर्तन आमजनताकै लागि हुनुपर्ने हो तर युद्धबाट बाँचेर आएको नेतृत्व आफ्नो ‘नाफाको जिन्दगी’को प्रयोग आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन र सहिद तथा बेपत्ताका सपना पूरा गर्न होइन, सम्पत्ति कमाउने र आफूआफू रमाउने प्रतिस्पर्धामा व्यस्त छ। उनीहरू आजभोलि सायद पैसा र पदबाहेक केही देख्दैनन्। हिजो कम्युनिस्ट आदर्शका लागि लडाइँ चलेको थियो। आज सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त्यो आन्दोलन, त्यो नेतृत्व र त्यो यात्रा अब कम्युनिस्ट नै नरहने दोसाँधमा पुगिसकेको छ। तर, यो कुरा मान्न उनीहरू तयार छैनन्।